တစ်ဝမ်းကွဲ ညီအကို မောင်နှမများ နီကာ ပြုပိုင်သလား။ (ဖတ၀ါ) | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
တက္ကဝါ – Takkwa →
မေး။ ။တစ်ဝမ်းကွဲ ညီအကို မောင်နှမများ နီကာ ပြုပိုင်သလား။ အစ္စလာမ် တရားတော် က ခွင့်ပြုထား ပါသလား။ မည်သည့် သွေးသားအဆင့်ထိ နီကာပြုပိုင်သနည်း။ကုရ်အာန် နှင့် ဆွာဟီဟာဒစ် အရဖြေ ကြားပေးပါ။
ဖြေ ။ ။မာလာသန်း ရဲ့7နာရီအရင်က က ပေးခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်
မောင်နှမ ၀မ်းကွဲ နေကာပြု ပိုင်ပါသည်။ ယခုမှ မဟုတ် ရှေးယခင်ထဲက မောင်နှမခြင်း ပေးစားသော အလေ့ အထရှိပါသည်။ အချို့က အဖေညီ အကိုမွေး မပေးစားသော်လည်း အချို့က အဖေညီ အကိုမွေး ပင် ပေးစားကြပါသည်။
မွတ်စလင် အမျိုးသားတဦးသည် အောက်ဖေါ်ပြပါ အမျိုးသမီး များနှင့် ထိမ်းမြားပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း ကုရ်အာန် ၄း၂၃ တွင် တားမြစ်ထားသည်။
-အမေ၊ အဘွားနှင့် အထက် အဆက်အနွယ်များ
-သမီး၊ မြေးနှင့် အောက် အဆက်အနွယ်များ
-အရီးကြီး၊ အရီးလေးများ(အဖေဘက်မှ အဒေါ်များ)
-အမိကြီး၊ အမိထွေးများ (အမေဘက်မှ အဒေါ်များ)
-အစ်ကို (သို့) ညီ၏သမီးများ (တူမများ)
-အမ (သို့) ညီမ၏ သမီးများ (တူမများ)
-နို့တိုက်ကျွေးခဲ့ဘူးသော နို့ထိန်းသည် မိခင်များ
-ဇနီးမိန်းမများ၏ မိခင် (ယောက္ခမ)များ
– မယားပါ သမီးများ
(ဥပဒေအရ ထိုသို့ ထိမ်းမြားခြင်းများသည် ပျက်ပျယ်သော ထိမ်းမြားခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့် အခွင့် အရေး နှင့် တာဝန်မျှမရှိ။)
-ညီအမ ၂ယောက်ကို တချိန်တည်းတွင် ပေါင်းသင်းခြင်း။(ဒုတိယပေါင်းသင်းခြင်း တရားမ၀င် ပျက်ပျယ် သည်။ သို့သော် ပထမ တယောက်ကို ကွာရှင်းလိုက်လျှင် ဒုတိယတယောက်မှာ တရားဝင်ဖြစ်လာသည်။)
ကုရ်အာန်အရ တားမြစ်ချက်တွင် မောင်နှမ၀မ်းကွဲ တားမြစ်ထားခြင်းမရှိ၍ မောင်နှမ ၀မ်းကွဲချင်း တရားဝင် ထိမ်းမြား လက်ထပ် နိုင်ပါသည်။
ကောင်စရ် ရဲ့ yesterday က ပေးခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်
တရားတော်အရလည်း အပြည့်အ၀ ပိုင်ပါတယ်.
မည်သည့်သွေးသားအဆင့်ထိ နေကာဟ်ပြုပိုင်လဲဆိုတာ ကုရ်အာန်အရ….
(အို-မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူ အပေါင်းတို့) အသင်တို့အဖို့ (နိကာဟ်ထိမ်းမြား လက် ထပ်ခြင်း မပြုကြရန်) ဟရာမ် ဟူ၍ မြစ်တားထားပြီးဖြစ်သောမိန်းမများကား၊ အသင်တို့၏ မိခင်များ သည် လည်းကောင်း၊အသင်တို့၏ သမီးများသည်လည်းကောင်း၊ အသင်တို့၏ အစ်မ များ၊ နှမများ သည်လည်းကောင်း၊ အသင်တို့၏ အရီးကြီး၊အရီးကလေးသည်လည်းကောင်း၊ အသင် တို့၏ အမိကြီး၊ အမိထွေးတို့သည်လည်းကောင်း၊ ညီ (သို့မဟုတ်) အစ်ကို၏ သမီးများ သည် လည်း ကောင်း၊ အသင်တို့ အား နို့ရည်တိုက်ကျွေးခဲ့ ဘူးသော နို့ထိန်း သည် မိခင်တို့သည် လည်းကောင်း၊ အစ်မ၊နှမ၏ သမီးများ သည်လည်းကောင်း၊ နို့စို့ဖက် အစ်မ၊ နှမများ သည် လည်းကောင်း၊ အသင်တို့၏ ဇနီးမိန်းမတို့၏ မိခင်များသည်လည်းကောင်း၊ အသင်တို့ ပေါင်းသင်း စပ်ယှက်ခဲ့ဘူးကြသော ဇနီးမိန်းမတို့မှ ပေါက်ဖွားကြကုန်သော အသင်တို့၏ရင်ခွင်၌ ကြီးပြင်း ကြသော မိမိတို့မယားပါ သမီးများသည် လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ကြကုန်သတည်း။သို့ရာတွင် အကယ် ၍ အသင်တို့သည် ယင်းဇနီးမိန်းမတို့နှင့် ပေါင်းသင်းစပ်ယှက်ခြင်း မပြုခဲ့ကြပါမူ (ထိုမယားပါ သမီး များနှင့် ထိမ်းမြားခြင်းအားဖြင့်) အသင်တို့၌အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာမျှမရှိပေ။ ၄င်းပြင် အသင်တို့ ၏သား ရင်းတို့၏ဇနီးမိန်းမတို့(နှင့်ထိမ်းမြားခြင်း)သည်လည်းကောင်း၊ညီအစ်မနှစ်ယောက်တို့ကို (တစ်ချိန် တည်းထိမ်းမြန်း) ပေါင်းသင်းခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ (မြစ်တားပြီးဖြစ်ပေ သည်)။ သို့ရာ တွင် (ဤအမိန့်တော်မကျရောက်မီက)ပြုခဲ့သည်တို့သည်(ခွင့်လွှတ်ပြီးဖြစ်ချေသည်) အကြောင်း တမူကား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် (ပြစ်မှုဒုစရိုက်တို့မှ) အကြိမ်ကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်ပေး သနားတော်မူသောအရှင်၊ အလွန်တရာ သနားကြင်နာညှာတာတော်မူသော မဟာကရု ဏာတော်ရှင် ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။(4:23)
အထက်ပါ အာယတ်တော်မှာပါတဲ့အမျိုးသမီးများက လွဲပြီး ကျန်ရှိတဲ့အီမာန်ရှင်အမျိုး သမီးများ အားလုံးနဲ့ နေကာဟ်ပိုင်ပါတယ်. ညီအစ် မနှစ်ယောက် တစ်ခါတည်းနေကာဟ် လုပ်ခြင်းမပိုင်ပေ မယ့် တစ်ယောက်နဲ့ အပြီးကွာ ရှင်းပြီး ရင်တော့ အခြား တစ်ယောက် နဲ့ နေကာဟ် လုပ်ခွင့်ရှိပါ တယ်..
This entry was posted in ဓမ္မသတ် ဖတ၀ါ. Bookmark the permalink.